Isingaonekwe Ruoko, inotevera Apple chirongwa chekudzora iyo iPhone | IPhone nhau
Kuti Apple iri kushanda pane chishandiso cheAmazon Echo-haisisiri nhau Ichi chishandiso chitsva chave nerunyerekupe kwemwedzi chaigona kuona mwenje gore rinouya uye kuti chingatibvumidze kudzora ese akachenjera michina mumba medu (mwenje, machira, mapofu, zvishandiso). Asi runyerekupe rwazvino rwekuti Bloomberg akatitaurira nezuro rinosanganisira chimwe chinhu chinotonyanya kufarira uye icho chinganyatso shandura maitiro ekudzora smartphone yedu. Iyo "Invisible Ruoko" chirongwa chinosanganisira mukana wekushandisa Siri kudzora ese mashandiro enharembozha yedu pasina kuibata, uye zvinotora makore matatu kuti apedze.
Siri yakavhurwa muna 2011, uye mushure mekutanga kwekuchinja, mubatsiri weApple akatambura nekushanduka kushoma mumakore akatevera, zvakanyanya zvekuti kunyangwe makwikwi aive pamberi payo nedzimwe nzira. Kuvhurwa kweApple TV gore rakapfuura neSiri rakabatanidzwa gore rapfuura kwaive kutanga kwekumhanyisa kutsva mukuvandudzwa kwemubatsiri kunogona kuguma nekudzora kwakazara kweese iPhone yedu nePadad pasina kushandisa maoko edu. Goverana peji rewebhu neshamwari, purinda pikicha kana kutumira chinongedzo muemail pasina kubata iPhone yedu kana kuvhura chero chishandiso kunogona kuve kwechokwadi mumakore matatu kana chirongwa cheApple chichienderera mberi.
Izvi zvisati zvaitika, Apple "Amazon Echo" yaizosvika, chirongwa chakatogadzirwa uye chinonzi chiri kuyedzwa kumba nevamwe mainjiniya. Yakatanga makore maviri apfuura maererano nevanhu vepedyo neprojekti, Uyu mutauri-mubatsiri aizove Apple yazvino nyowani yemahara kuburitswa kubvira payakaunza iyo Apple Watch muna 2014.. Chishandiso chitsva ichi chinogona kuratidzwa muchirimo chegore rinouya nekutanga kwayo muhafu yekutanga yegore kunyangwe pasina dhata rakavimbika pane rekupedzisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Siri » Isingaonekwe Ruoko, inotevera Apple chirongwa chekudzora iyo iPhone